Mirabilis: foto na nlele, akuku na nlebara anya na mbara ala - Osisi - 2020
Mirabilis - okooko osisi na-esi ísì ụtọ nke abalị mara mma
Mirabilis bụ osisi na-akụ kwa afọ nke nwere okooko osisi tubular mara mma. Ọ bụ nke ezinụlọ Niktaginov wee si n'ógbè ugwu na-ekpo ọkụ nke North na Central America. Mgbe ụfọdụ ana akpọ mirabilis “mirabillis” ma ọ bụ “ịma mma abalị.” Nke bụ eziokwu bụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị niile na-acha ifuru na-enwu gbaa na-emechi, ma na mgbede, ha na-ama ifuru, na-agbasa isi ike dị ụtọ. N'ehihie, mirabilis ji ahihia na-agbasa nke ọma na-eto n'ubi ahụ.
Mirabilis bu nkpuru osisi nke ahịhịa na - agha kwa afọ. Mkpanaka ya na-agbagọ, dị ka eriri, na-azụ ya. Ọ na-akpụzi mkpụrụ nkwụ ogologo, kpuchie ya na anụ acha. Ihe ndị na-enye ndụ ahịhịa na gburugburu ebe obibi na-enyere osisi ahụ aka ịlanarị ụkọ mmiri na udu mmiri.
Osisi ahihia siri ike nwere ọtụtụ akụkụ akụkụ, yabụ, osisi ahụ na-etolite ohia 80-100 cm dị elu. Akwụkwọ petiole dị n'ụdị oval ma ọ bụ n'ụdị na-enweghị atụ toro na ome. Mpempe akwụkwọ ọcha dị nro. A na-ahụkarị akwara ọkụ na etiti. Ka oge na-aga, akụkụ ala nke ụka na-amịkọta ma kpuchie ya
Na Mee-June, na axils nke akwụkwọ na elu nke oge ịse na-acha ifuru na-acha ọcha oge ntoju nke 2-3.5 cm. A na-ese corolla n'ụdị mgbịrịgba ma ọ bụ dome nke nwere fals fused na acha ọcha, odo ma ọ bụ ndo dị iche iche nke pink. E nwere ụdị dị iche iche nke okooko osisi nwere agba dị iche iche na-eto na otu ohia. Petals nwekwara ike ịdị larịị ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe. N'ime etiti ahụ bụ stamens toro ogologo nke nwere nnukwu anhs. Ha nwere ike nwee ụcha iche iche n'ihe gbasara petals. Mgbe okooko, mkpụrụ chara n'onwe - igbe igbe na-acha oji.
Ofdị nke mirabilis
Ọmụmụ nke mirabilis nwere ụdị osisi dị iri isii. N'ime ugbo ebe obibi, a na-ejikarị Yalapa mirabilis na ụdị ya.
Mirabilis Yalapa. Mkpụrụ osisi herbaceous 30-80 cm dị elu mejupụtara Ome ndị ziri ezi, nke a na-akpọ nke ukwuu. Ejiri nnukwu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ kpuchie ha. Na June, corymbose inflorescences nwere okooko osisi nwere oghere abalị ruo 2,5 cm n’ogologo dayameta Ha na-ebu isi ísì ụtọ dị ukwuu ma na-acha ọcha, pink, odo ma ọ bụ ọbara ọbara. Ngwakọta dị iche iche "Oge mmiri" bụ ihe a ma ama n'etiti ndị na-elekọta ubi. Ejiri okooko mara mma na-emetụta ya na osisi na - ebu ifuru nke agba kachasị iche (oroma, utu, ọcha, ọbara ọbara, odo na odo).
Mirabilis nwere otutu. Osisi ahịhịa na-eto ihe dị ka 80 cm tojuru etoju kwụ ọtọ, kpuchiri ya wee kpuchie ya. Na Mee, inflorescences nwere ruo isii buds oge ntoju na elu nke oge ịse na axils nke epupụta. Ha na-etolite n'otu okpukpo okpukpo-emeghe ma meghee n'aka nke ya. Osisi tubular bụ odo odo. Dayameta ruru 4-6 cm.
Mirabilis dị gburugburu. Ejiri mkpirisi osisi toro ogologo ka o buru cm 30 ka ọ dị elu karịa cm cm ruo ogologo atọ ruo na elu okooko osisi pink atọ na-acha odo odo na-ese n’elu ya. Dayameta nke corolla bụ 1 cm. Ifuru ahụ na-emeghe na mgbede ma na-emechi n'isi ụtụtụ.
Ọ bụ ezie na mirabilis bụ perennials, ha na-ajụ oyi. N'ihi ya, n'ubi toro dị ka annuals. Ọ kachasị adaba na-aghaghari mkpụrụ site na mkpụrụ. Ha na-enye ezigbo onwe-seeding na na ihu igwe ihu igwe ifuru akwa ọhụrụ. Na mpaghara ndịda, a na-akụ mkpụrụ n'ime Eprel ozugbo na ala mepere emepe. Iji mee nke a, họrọ nke ọma nwere ọkụ, mepee ebe nwere ahịhịa na-eme nri. Mirabilis na-eto nke kacha mma na-anọpụ iche ma ọ bụ na -echekwa ala.
N'ebe ebe ihu igwe dị oyi, a na-etolite seedlings tupu etolite. A na-akụ mkpụrụ na March, na-ekesa nnukwu mkpụrụ otu oge na ite a na-eji diski ma ọ bụ igbe dị omimi. Ebe ọ bụ na rhizome dị oke mkpa, ikike ahụ kwesịrị ịdị omimi. Ihe mejupụtara ala maka mkpuru ahihia bụ aja dị larịị, peat na ala kpọrọ nkụ. Na mbụ, a na-akụ mkpụrụ ndị ahụ n'otu abalị na ngwọta nke manganese, wee kụọ ya ruo omimi nke 1.5-2 cm. Mmiri na-agba ụwa ma kpuchie ihe nkiri. Inwe ihe ọkụkụ na okpomọkụ nke + 18 ... + 20 Celsius C ma dị elu na ebe a na-enwu ọkụ.
Ome ga-apụta n'ime izu 2-3. Seedlings na akụwa dị iche iche enweghị ike ịta. Na Mee, na ụbọchị anwụ na-acha, ha na-akpọpụ ya n'èzí maka isi ike. Mgbe ụla mmiri gafere, a na-akụ ihe ọkụkụ n’ime ọhịa.
Mgbe ụfọdụ, abalị a na-achọ mma nke eji achọ mma site na tubers. Usoro a ga - enyere gị aka ịchekwa ihe iriba ama nke osisi nne. A na-egwu olulu n'oge ọdịda ma dọba ya na arịa nwere sawdust. A na-echekwa ya ruo mgbe mmiri dị na friji ma ọ bụ ebe ọzọ na okpomọkụ nke ihe dị ka + 5 Celsius. N'oge opupu ihe ubi, a na-akụ nodules na ala mepere emepe.
Osisi na-agbasa nke ọma site na ibe. A na-egbutu Ome ndị nwere ihe dị mkpa n'oge ọkọchị ma kpọnwụọ ha ruo ọtụtụ awa n'ikuku. Mgbe ahụ, a na-emeso iberibe ya na "Kornevin" ma na-akụ akụ na ájá ájá nke peaty. Mgbatị na-ewe izu 2-3. N'oge a, kpachara anya sụọ ngọngọ ma debe ya n'ọnọdụ okpomọkụ nke + 20 ... + 24 Celsius. Ọ bara uru kpoo ala n'okpuru. Osisi gbanyere mkpọrọgwụ na-abụkarị ndị toro eto n'ime mmiri tupu oge opupu ihe ubi, ma tinyezie ya n'ime ala.
Caregha mkpụrụ osisi
Maka mirabilis, oke ọkụ dị mkpa. Ọ na-eto nke ọma na mpaghara mepere emepe ma ọ dịghị atụ egwu drafts. Ma na ele mmadụ anya n'ihu ma ọ bụ n'okpuru okpueze nke osisi, uto nke osisi ga-ebelata nke ukwuu, okooko agaghị enwe ike. Ala nke akuku kwesiri ibu ma gha enye ya nri. A na-eji ntụ ntụ dolomite gwakọta ala acidic. Oghere dị n'etiti ihe ọkụkụ toro eto na-adabere n'ịdị elu nke oke ohia ma ọ bụ 25-60 cm.
A na-akụ mkpụrụ site na ntinye aka ka ọ ghara imebi ogologo rhizome. Ozugbo a ghachara ahịhịa, ala ahụ na-abụ ntụ ma ọ bụ peat.
Mirabilis hụrụ n'anya na-ekpo ọkụ. N'ịkọ mmiri nke ọma, ọ naghị atụ egwu ọbụna okpomoku dị egwu, mana ọ naghị anabata ntu oyi. Ugbua na -5 Celsius C osisi ahụ na-anwụ. Ebe ọ bụ na mkpọrọgwụ dị nso n'elu, ichebe perennike adịchaghị ekwe omume ruo mgbe mmiri. N'ebe ndịda, a na-ebipụ ahịhịa maka oge oyi, na-ahapụ naanị obere ogwe osisi. Ala kpuchie ya na mkpuru osisi dara n'ala na okpo osisi spruce rue ogo 10-15 cm.
Mirabilis kachasị masị ịgbanye mmiri. Ọ na-eguzogide ntakịrị ụkọ mmiri. Ọ bụrụ na mmiri ezighi, otu ịgba mmiri kwa izu zuru ezu. Ọ bụrụgodị na akwụkwọ hapụ turgor, ozugbo ogbugba mmiri n'ubi, ha ga-eweghachi. Gbara mmiri n'oge okooko dị ezigbo mkpa, n'ihi na ntụ nwere ike ịda n'enweghị oge ntoju.
Mirabilis na-eto ngwa ngwa chọrọ inye ya nri oge niile. N'oge opupu ihe ubi mgbe ịghasịrị, a na-akụkọta ahịhịa nwere ọtụtụ ihe ọkụkụ maka okooko osisi. A na-emekarị akwa dị elu ugboro abụọ ọzọ n'oge ọkọchị. Iji organics ekwesighi. Mgbe ịgba mmiri na akwa akwa dị elu, a ga-atọpụ ụwa n'akụkụ osisi ahụ ma kpochapụ ata.
Ihe isi ike nwere ike ime
Stems ga-etolite ngwa ngwa, yabụ mirabilis na-enwekarị nsogbu. Na-ezughi oke ikuku, mildew powdery, ajari, mkpọrọgwụ na-amalite. Mgbochi oria a na-erube isi na igha mmiri na oke ohia. A na-eji ahịhịa na-egbu egbu ("Fundazole") na-agwọ ahịhịa ndị metụtara ya. Mirabilis na-eguzogide ọgụ site na ụmụ ahụhụ, yabụ ịkwesighi ichegbu onwe gị banyere nchebe pụọ na ha.
Ihe eji eme mirabilis
Bushessasa bushes kpuchie ya na nnukwu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ga-abụ ezigbo ndabere na flowerbed. Ebe ọ bụ na okooko osisi na-emechi n'ehihie, a na-eji mirabilis mee ihe maka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ maka ndị ọzọ bi n'ubi ifuru ahụ. Ma na mgbede na n'isi ụtụtụ, ọ na-eduga n'ịdị mma na isi. A na-eme Rabbits na mixborders na mirabilis, a na-ahazịkwa hedges na nnukwu bushes. Osisi a na - esi ezigbo ike, ya mere ndi mmadu ndi nwere obi uto ka ha na --eme ka ha kuo ahihia site n’ebe izu ike ahu. N'ime ogige ifuru agwakọta na-esote mirabilis ị nwere ike ịkọ petunia, marigolds, cloves, daisies na daisies.
N'inwe àgwà ịchọ mma dị elu, mirabilis nwere nzube ọgwụ. A na-eji ihe ndozi nke ahịhịa na mkpị nke anụ ahụ dịka mgbochi mkpali na antibacterial. A na-ekeji tuịlị dị ka ọgwụ mgbu, a na-ejikwa mmiri ọ freshụ juiceụ mee ihe dị ka nkwadebe ọgwụgwọ ọnya.